अधिक तौल भएर पनि सफलता हासिल गरेका ४ क्रिकेटर ! | | Neplays.com
अधिक तौल भएर पनि सफलता हासिल गरेका ४ क्रिकेटर !
वर्तमान समयमा क्रिकेट खेलाडी बन्नका लागि चाहिने सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो फिटनेस, । यदि कुनैपनि क्रिकेट टिममा स्थान बनाउनु छ भने यस्का लागि सबैभन्दा फिटनेस नै सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ ।
अहिले क्रिकेट खेलाडीहरुको फिटनेसको विषयलाई लिएर यो–यो टेस्टको विकास भएको छ । तर यो निकै बिबादस्पद रहेको छ । कुनैपनि खेलाडी यो–यो टेस्टमा उतिर्ण नभएमा उस्ले कुनैपनि टिममा स्थान बनाउन सक्दैनन् ।
क्रिकेट खेल्ने अधिकंश देशले अहिले यो–यो टेस्टलाई अपनाइसकेका छन् । जस्का कारण क्रिकेटमा अहिले मोटो वा अधिक तौल भएका खेलाडीहरुलाई क्रिकेट खेलेको देख्न सकिदैन ।
यो टेस्ट निकै बिबादस्पद रहेको छ किनकी विशेषज्ञहरुका अनुसार प्रतिभा र राम्रो खेलाडीहरुले शारिरक अवस्था जस्तो भएपनि क्रिकेट खेल्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा ब्यक्त गरेका छन् ।
अधिक तौल भएर पनि अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सफलता हासिल गर्न सफल विश्वका ४ क्रिकेटरहरु ।
१. इन्जामाम उल् हक (पाकिस्तान)
पाकिस्तानका पुर्व कप्तान तथा चर्चित खेलाडी इन्जामाम उल् हक शारिरक रुपमा निकै मोटो भएपनि उनको करियर निकै तारिफयोग्य रहेको थियो । उनले आफ्नो करियरको टेस्ट क्रिकेटको १२० खेलमा ४९.६० को औसतमा ८८३० रन बनाएका छन् । साथै उनले एकदिवसीय क्रिकेटमा ३७८ खेलमा ३९.५२ को औसतमा ११७३९ रन बनाएका छन् ।
२.सेन वार्न (अष्ट्रेलिया)
सेन वार्नले २२ वर्षमा आफ्नो क्रिकेट करियरको शुरुवात गरेका थिए । वार्नको बलिङलाई लिएर ब्याट्सम्यानहरु सबै चकित हुन्थे । उनले आफ्नो टेस्ट क्रिकेट करियरमा ७०८ विकेट लिएका छन् । भने उनले वानडे क्रिकेटमा २९३ विकेट लिएका छन् ।
३. अर्जुन रनतुंगा (श्रीलंका)
श्रीलंकाका खेलाडी अर्जुन रनतुंगाले आफ्नो करियरको श्रुवात १९८२ मा गरेका थिए । उनले आफ्नो पहिलो एकदिवसीयखेल इंग्ल्यान्डकोबिरुद्धमा खेलेका थिए । उनले आफ्नो २६९ एकदिवसीय खेलमा ३५.८४ को औसतमा ७४५६ रन बनाएका छन् । त्यसबाहेक उनले ९३ खेलमा ३५.६९ को औसतमा ५१०५ रन बनाएका छन् ।
४.डेबिड बुन (अष्ट्रेलिया)
अधिक शारिरक तौल भएका कडेबिड बुनले आफ्नो करियरको शुरुवात १९८४ मा गरेका थिए । उनले छोटो समयमा नै टेस्ट र वानडे क्रिकेटमा चर्चा कमाउन सफल भए । उनले टेस्ट खेलहरुमा बलिङ गर्दै १०७ खेलमा ४३.६५ को औसतमा ७४२२ रन बनाएका छन् । त्यस्तै एकदिवसीय खेलमा उनले ३७.०४ को औसतमाम ५९६४ रन उनको नाममा रहेको छ ।